Akhriso:Maxaa Mootooyinka Bajaaj-ka looga Mamnuucay waddada Maka Al-mukarama | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Akhriso:Maxaa Mootooyinka Bajaaj-ka looga Mamnuucay waddada Maka Al-mukarama
Akhriso:Maxaa Mootooyinka Bajaaj-ka looga Mamnuucay waddada Maka Al-mukarama
Maamulka gobalka Banaadir ayaa amar dul dhigay wadayaasha gaadiidka loo yaqaano Bajaaj-ka
Amar ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu mamnuucay in xiliyada habeenkii lagu arko gadiidka yar yar ee Mooto Bajaajka waddada Maka Al-Mukarama oo ah jidka ugu mashuulka iyo shaqada badan magaalada Muqdisho.
Wadayaasha gaadiidka mootooyinka qaarkood oo aan wax ka waydiinay go’ankan ayaa waxaa ay sheegeen inay la xun yihiin islamarkaana ay u arkayaan mid lagu bartilmaameed-sanayo shaqadooda iyo nolol maalmeed kooda.
“Waa wax laga xumaado go’aankan, maxaa yeelay waddada Makah al mukarama waa waddada Kali ah ee ugu mashquulsan lacagona aan ka samayno” ayuu Xaqiiqatimes, u sheegay Cali Cabdikariim Xaaji oo aan maanta galinkii dambe kula kulanay Isgoyska Shaqaalaha.
Wadayaasha Bajaaj-ka ayaa sidoo kale sheegay inay bixiyaan qarash badan, islamarkaana ay dowladda kala kulmaan caqado aad u badan oo ay ka mid tahay in la is hor-taago shaqadooda.
Waxaa ay sheegeen wadayayaasha qaarkood in dhammaanba ay diyaar la’yihiin waajibaadka saarayn oo ay ka mid tahay bixinta canshuurta, sidaa daraadeed aysan ogeyn sabab gaar ah shaqada looga joojiyo.
Maxay tahay sababta ka dambaysay in gaadiidka Bajaaj-ka laga joojiyo Makka Al-mukarama.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa ku macneeyay sababta looga mamnuucay Bajaajka xilliyada habeenkii in ay maraan waddada Maka Al Mukarama in ay tahay sugida ammaanka.
Waxaa hore loogaga mamnuucay mooto Bajaajka ina y maraan qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho, taasoo culeys weyn ku ah wadayaasha gadiidka ee ka xamaasha.
Dhalinyaro badan ayaa shaqo abuur u noqotay mootada bajaaj kuwaasi oo qaarkood ka baaqday safaro halis ku ahaan lahaa nolashooda, sida tahriibka.
Xuseen Ibrahim oo ka tirsan dhaliyerada ku nool Muqdisho, ayaa inoo sheegay tahriibka oo maalmahan yeraaday ay sabab u tahay mootooyinkan.
Dhalinyaro badan ayaa nolol maalmeedkooda ka hela shaqada mootooyinka iyadoo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay Mootooyinka Bajaajka qeyb weyn ka qaateen adeegyada caasimada dalka ee Muqdisho.
Previous articleJilaaga Caanka ah Om Puri oo geeriyooday
Next articleFaah-faahin ka soo baxaysa toogashooyin ka dhacay Florida